Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 27/11/2020)
Uma uyazibuza ukuthi ithole iminyuziyamu kakhulu eYurophu, siye nawe embozwe! Noma ngabe art, kazwelonke, noma okwemvelo umlando, eminyuziyamu ohlwini lwethu ngeke ahluleke mangaza nawe.
Museum ngo-Stream, Antwerp, Belgium
Museum ngo-Stream noma MAS kuba Museum enkulu e-Antwerp. Uma ufuna -panoramic umbono, kukhona ukufinyelela kwamahhala esophahleni Museum. I eziyinkimbinkimbi MAS Ubuye yokudlela kanye cafe ngezansi. Museum kukodwa lovely futhi kuwufanele ukuvakashelwa uma Antwerp.
Enye Museum e Netherlands, le Museum waseBhayibhelini itholakala Amsterdam. Kuyinto omunye iminyuziyamu kakhulu eYurophu uma ufuna ukufunda okwengeziwe ngeBhayibheli. Bijbels Ukuvakashela kusiza akuqonde nomthelela iBhayibheli umphakathi Dutch. Kuyinto ngokungangabazeki Museum esiyingqayizivele, ayifanelekela kahle kulabo abathanda zenkolo umlando.
Kunsthistorisches Museum iyona eyaziwa kakhulu ubuciko Museum e Austria, eyaziwa ngokuthi i-Museum of Ubuciko. Ezinye ekhombisa yayo edume kakhulu zihlanganisa imisebenzi Rembrandt, Michelangelo, Raphael, futhi Rubens. Bekulokhu kumangalisa kubathandi bezobuciko ngobuciko obuhle kusukela ekuvulekeni kwayo 1891. Noma ubani ehambela Vienna ngesitimela kufanele benze amalungiselelo okubona iMnyuziyamu yaseKunsthistorisches.
Skansen Vula-Air Museum, Stockholm, Sweden
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-museums-europe%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#iminyuziyamu #traveleurope europetravel i-eurotrip Museum Izikhangibavakashi travelaustria travelfrance travelgermany travelnetherlands traveltips